Ubuntu TV: I-Linux ye-TV | Kusuka kuLinux
Inkampani yeCanonical yethule UbuntuTV, uhlelo lweLinux olwenzelwe ithelevishini. Le yinguqulo Ubuntu kushintshwe ukusetshenziswa ku omabonakude lokho kuzovumela ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza kanye nokufinyelela kuzinsizakalo zefilimu noma zomculo.
ICanonical idale i-buzz ngokuhlanganyela kwayo kwi-CES ngezinsuku zokugcina zesonto eledlule. Le nkampani ibimemezele ukuthi izokwenza isimemezelo esikhulu esiphathelene no-Ubuntu, namahemuhemu anda.
Kuqale kwaba nokuqagela ukuthi iCanonical izomemezela inguqulo ye-Ubuntu yezingcingo namathebulethi. Kodwa-ke, okwamanje iCanonical inqume ukubheja kwenye imakethe echumayo, amathelevishini.
Ngesikhathi izinkampani eziningi ngokwengeziwe zethula ezazo 'i-Smart TV', iCanonical yethule Ubuntu TV. Luhlelo oluletha Ubuntu kumathelevishini. ICanonical ixoxe ngeminye imininingwane yohlelo futhi idale iwebhusayithi lapho ungabona khona izici zayo zokuqala.
Kusuka ku-Ubuntu TV ungangena ezinhlelweni zethelevishini futhi ubuke okuqukethwe. Le nkampani ichaze ukuthi abasebenzisi bazokwazi ukusesha okuqukethwe, bakurekhode futhi bakhiqize kabusha ngokuthanda kwabo.
Ngaphezu kwalokho, kuzokwazi futhi ukusebenzisa izinhlelo, ukufinyelela ama-movie nochungechunge ngohlelo lokusakaza olulawulwa ngokuphelele yi-Canonical.
Ukudlala umculo nokufinyelela ezinsizakalweni ezifana ne-YouTube noma iziphequluli zewebhu kungezinye izici ze-Ubuntu TV. Ngokuya ngewebhusayithi entsha yokwethula Ubuntu, abasebenzisi bazonikezwa namathuba okuhlanganyela namanye amaqembu.
Ngalo mqondo, iCanonical ikhethe ukugcinwa kwamafu ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthola amadokhumenti abo kusuka ku-Ubuntu TV nakwamanye amadivayisi.
Okwamanje akwaziwa ukuthi yimaphi ama-TV brand azobheja ku-Ubuntu TV, okuzoba uhlelo oluvulekile olutholakala kubakhiqizi. Isinyathelo sikaCanonical sokuguqula Ubuntu sibe ukufinyelela okuvulekile 'i-Smart TV' kungasiza lobu buchwepheshe ukuthi buzihlanganise unyaka wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ubuntu TV: I-Linux ye-TV
Ngethemba futhi ubuntu bunqoba ngakho ngandlela thile igama le-gnu / linux lizokwaziwa kuzo zonke izinkomba
Ngiyakuthanda lokho kunqoba kwe-linux
I-US Air Force ifudukela eLinux ngenxa yegciwane